Crypto dhalinyarada - Blockchain News
cryptocurrencies caan, ayaa soo gaadhay qolfo leh sida, in isku tallaalidda aad u caajis ah ama aad u dhawrsataan this Sphere xisbiga. Waxaa soo baxday in dhiirranaan iyo dadaal lagu muujiyay ma aha oo kaliya by ganacsatada iyo maal la tobanaan sano oo waayo aragnimo ganacsi on dhaafsi, laakiin sidoo kale by dhalinyarada caadiga ah.
carruurta Modern ku dhashay da'da digital, ay hareereeyeen dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka tan iyo carruurnimada, oo ay bilaabaan xidhiidhka kombiyuutarada hor Quruumihii hore. Laga soo bilaabo da'da hore, waxay leeyihiin fursado isgaarsiinta sida in aan lagu riyoon by Quruumihii hore. Sidaa darteed, wakiillo ka socda qarnigan Z waa tababaran dhakhso iyo dareen ah organic ee dunida ka mid ah farsamooyinka casriga ah.
Erik Finman, mid ka mid ah dadka dhallinyarada ah ugu guulaha badan oo duurka ku ah cryptocurrency, ee 12 sano dareemay rajada ah Seeraar. Waayo, 6 sano, ayuu u soo celiyey xaaladda digital 400 bitcoins cajiib ah, taas oo ah in ka badan 4 milyan oo dollar oo u dhiganta heerka hadda. Oo kulligood waxay bilaabeen in 2011 la $ 1000 badbaadiyey on casho iyo hadiyado dhalashadiisa. Seeraar markaas u qalantay $ 12.
by 2013, Seeraar ayaa koray badan in hantida iibin ee Eric ahaayeen ku filan oo ay u bilowdo adeegga si aad u baadhid macallimiinta Botangle, waxa kale oo uu ka dib iibin bitcoins. Dhallinyarada crypto-enthusiast waxaa halkaa kuma joojin, in uu ra'yi, Seeraar xajisto racfaanka maalgashi, iyo qiimaha ay gaari karaan hal milyan oo doolar. millionaire dhallinyarada ayaa sidoo kale aaminsan in nidaamka waxbarasho ee casriga ah waa shinka, iyo YouTube iyo Wikipedia bari karaan wax badan oo dheeraad ah. xitaa uu ku dooday waalidiinta in uu lahaa in aan jaamacad u tago haddii uu yaabaa inuu hal milyan oo doolar ka hor qaangaarnimada gaarey. Ma aha waano xun qarniga casriga ah?
Dabcan, Eric Finman ma aha tusaale ahaan keliya ee dhallinyaro ah isha ku cryptocurrencies. Isaga oo ugu weyn “horjeeda” waa Eddy Zillan, oo hore u noqday xiiso dadka crypto-firfircoon ee da'da 15. Waa aad u yar si ay u bilaabaan account Coinbase a, laakiin Eddy ma joojin oo wuxuu helay hab agagaarka xeerarka goobta. Waxa ugu horeeya ee uu sameeyeyna iibsan Ethereum waayo, $ 100. Waxaa xusid mudan in ka dibna halkaas joogin boqolaal qora iyo majaladaha, ninna baro kari lahaa sida si sax ah u dhaqmaan. Iyadoo ay taasi jirto, wiilka kasbaday ugu horeysay ee $ 10 for dhowr saacadood. Tani ma guuldareysato kara in ay isaga ku dhacay, maxaa yeelay, 10% in dhowr saacadood – koritaanka fiican. Later uu ku saabsan maal- $ 12 kun oo crypt ah. Muddo sannad ah ay u koray si ay u $ 350 kun. Haddaba Zillan waa 18 sano jir ah, uu leeyahay hawleed ka qiimo badan tahay $ 1 million oo camal uu laabtay taliyaha gaarka ah Cryptocurrency Financial.
kale “Cryptoteenager” – Andrew Cory, 11-sanadkii, ardayga ee foomka 6th u suurtagashay in ay wax ka qoraan Seeraar oo dhan buugga, taas oo uu aragtida uu nuxurka cryptocurrency iyo blockchain ka muuqataa. Buuga, laga yaabee khabiir ugu da'da yaraa ee kryptovlyutam xitaa laga iibsan karaa on Amazon. faa'iidada, Dabcan, ugu horayn waxa loogu tala galay caruurta, taas oo, si kastaba ha ahaatee, ma detract ka habboonaanta. Andrew qudhiisa ayaa, sida laga soo xigtay isaga si ay u, dhexaad ah 0.02 bitcoins.
Waxaa jira dhalinyaro ah crypto-dunida iyo “guys xun”. Sidaas, Seeraar Platinum ah, badan oo marin habaabin ah, la bilaabay by fraudster Caruurta. Si kastaba ha ahaatee, dadweynaha bixisay dareenka waxa u ah in wakhtiga, oo wuxuu lahaa inaan qirto in ay xaq darada ah ee mashruuca. Sida laga soo xigtay isaga si ay u, wuxuu qorsheeyay si ay u ururiyaan oo kaliya $ 5,000.
Sida iska cad, mustaqbalka baahida loo qabo ku takhasusay berrinka ku dhex yaal ee dhaqaalaha digital kori doono oo kaliya. Iyo soo jeedinta, by dhammaan xisaabaadka, ma inay ku Hadhi ka danbeeya labada.
Coincheck doonaya appr ...
Post Previous:Blockchain News 11.05.2018
Post Next:Blockchain News 14.05.2018